Izipho zoMoya oyiNgcwele:? Isityhilelo, amandla, impembelelo 
Ukwazi ukuba yintoni Izipho zoMoya oyiNgcwele Ileta eyabhalwa ngumpostile uPawulos kwabaseKorinte kufuneka ifunwe kwizibhalo ezingcwele. Apho, ngokukodwa kwisahluko 12, ukusuka kwindinyana 8 ukuya kweye-10 sipho ngasinye sichaziwe.
Izipho zizipho esizifumanayo, kwimeko yezipho zoMoya oyiNgcwele, sithetha ngezipho ezizodwa esiziphiwayo ngenjongo yokusikelela iBandla likaKristu ngokubonakaliswa kwayo nayiphi na.
Izipho azifezekiswa ngokholo kodwa zinikwa njengokuba uBawo eyibona intswelo kunye nesimo sengqondo sabantu bakhe. Ezi zipho zahlulahlulwe zangamaqela amathathu ngokweempawu nobume bazo.
1 Ukwahlulahlula izipho zoMoya oyiNgcwele
1.1 Izipho zoMoya oyiNgcwele: Izipho zoMfuziselo
1.2 Izipho zoMoya oyiNgcwele: Izipho zoMandla
1.3 Izipho zoMoya oyiNgcwele: Izipho zoKhuthazo
Ukwahlulahlula izipho zoMoya oyiNgcwele
Izipho zoMoya oyiNgcwele: Izipho zoMfuziselo
Ezi zipho zizisa kulwazi lomntu ezinye izehlo ezihlala zifihliwe njengeenjongo, amacebo okanye ukuthanda kukaThixo. Ezi zipho zezi:
Sisipho esivumela ukufumana izityhilelo ezikhethekileyo. Umzekelo ocacileyo wesi sipho sibonisiweyo sibona kuYesu uqobo xa athe waxelela uPeter ukuba phambi kokuba eqhule nokucula uya kusikhanyela kathathu. (Mat. 26:34)
Eli gama lesityhilelo linokuza ngamaphupha, imibono, isiprofetho okanye ilizwi elifanayo Iidayos.
Esi sipho, xa sibonakalisiwe, asibonisi iziganeko ezizayo kodwa endaweni yexesha elidlulileyo okanye langoku.
Enisahluko 4 seVangeli Ngokuka-Saint John, ibali lomfazi ongumSamariya liyabonakala, apho uYesu amxelela ukuba ubenamadoda amahlanu kwaye onayo ayingomyeni wakhe, lo ngumzekelo ocacileyo wokubonakaliswa kwesi sipho.
Sisipho sokomoya esimsulwa esibonakalisa ngokwakhiwa kwebandla lika Krestu. Ngesi sipho uyakwazi ukubona ukuba ngowuphi umoya osebenzayo emntwini ngexesha elithile.
Umpostile uPawulos usibonisa ngokucacileyo esi sipho xa wayenakho ukuqonda umoya owawusebenza ku-Elimas, loo ndima ifumaneka kwincwadi yeZenzo zabapostile kwisahluko 13 iivesi 9 ne-10.
Izipho zoMoya oyiNgcwele: Izipho zoMandla
Uhlobo lwesipho esingaphezu kwendalo esibonakalisa ukuba sikhulisa ukholo lwamakholwa nokwenza abo bangakholelwa kumandla kaThixo bakholelwe.
Isipho Sokwenza iMimangaliso
Sesinye sezona zipho zimangalisayo kuba xa ibonakaliswa yenziwa ngemimangaliso yendalo, enezinto ezinokuthi, xa umntu ethetha, zingenakwenzeka.
Kwilizwi likaThixo sibona ummangaliso wokuqala kaYesu wokuguqula amanzi abe yi wayini, into ekungekho mntu unokuyenza, uyenzile kwaye wamangalisa bonke ababelapho (Yohane 2: 9) Owona mqondiso uthandwa nguYesu.
Lukholo olunikwe nguMoya oyiNgcwele olungelulo ukholo oluqhelekileyo olunalo abantu kodwa luhamba ngakumbi. Lukholo olukhokelela umntu ukuba akholelwe kwinto engenakwenzeka, kwizinto zokomoya, kwinto evela ngqo kuThixo.
Kwilizwi likaThixo usixelela ngendoda ethi yayigcwele amandla kunye nobabalo, Oko kukuthi, isipho sokholo sabonakaliswa kuye, lo mntu nguStephen kwaye ibali lakhe likwincwadi yeZenzo Abapostile kwisahluko 6 ukusuka kwindinyana 8 kuye phambili.
Esi sipho sibonakaliswa kakhulu emzimbeni womntu kwaye kuphela xa kukho injongo yobuThixo kuphiliso oluthile. Kwesi sipho isininzi sisetyenziswa kuba kukho izipho ezininzi zokuphilisa hayi enye nje kwezinye. Oko kukuthi umntu unokufumana ukubonakaliswa kwesipho esithile sokuphiliswa, ngoko ayizibonakalisi ngokunyanga zonke izifo kodwa ezinye.
Iincwadi ezine zeVangeli kunye neNcwadi yeZenzo zaBapostile zizele zindinyana ezibalisela amabali ngemimangaliso yempiliso emangalisayo.
Izipho zoMoya oyiNgcwele: Izipho zoKhuthazo
Ezi zipho zibonakaliswa ngokwakhiwa kweCawa. Zizipho ezitsala umdla kakhulu kwaye ziyamangaliswa yimvelaphi yazo kunye namandla eziwanika wona xa zibonisa.
Sesinye sezipho ezona zitshutshiswa kakhulu kuba ngumlomo omnye kaThixo othetha ngalo.
Ayifanelanga ukuba ibhidaniswe nolungiselelo lokuprofeta njengoko zahluke ngokupheleleyo. Esi sipho sinokusetyenziselwa ukukhuthaza, ukwakha, ukuthuthuzela, ukufundisa, kunye nokuqinisekisa. Sisipho ekufuneka sisetyenziswe noxanduva kunye nocwangco kuba sithetha egameni likaThixo.
Ukuthetha ngalwimi luphawu loMoya oyiNgcwele, kodwa xa oku kusenzeka, lunye kuphela uhlobo lolwimi oluthethwayo.
Xa kuthethwa ngaphezu kwesini esinye, kungenxa yokuba isipho siyabonakaliswa. Iindidi zeelwimi zibonakaliswa yinjongo kaThixo, njengoko sibona kwincwadi yeZenzo zabaPostile kwisahluko 2 iivesi ukusuka kwi-12 ukuya kwi-XNUMX.
Xa esi sipho sibonakalisiwe sebenzisa umzimba wokholo kodwa yonke into ilawulwa kuphela ngengqondo kaKristu.
Esi sipho, njengoko siyiyo eyokugqibela, siqala ukubonwa xa kuqala ixesha loxolelo, ixesha lelo siphila kulo. Esi sipho sibonakaliswa sinika intsingiselo kwiilwimi ezahlukeneyo ezinokuthethwa xa uMoya oyiNgcwele uthatha ulawulo lweCawe.
Umpostile uPawulosi ucebisa abaseKorinte ukuba bathethe ngalwimi zimbi ngokuvakalayo xa ifunyenwe kuloo ndawo, kodwa ke kufuneka bakwenze oko ngokuzola, oku ngeenjongo zokugcina ucwangco emabandleni ukuze siwuqonde umyalezo wokuba nguThixo Ufuna ukunika ibandla.
Izipho zoMoya oyiNgcwele zinikezelwa ngeenjongo zikaThixo kwaye kufuneka zibonakaliswe ngendlela ukuze zikwazi ukuzalisekisa iinjongo zazo ngaphandle kokuphazamiseka.
Ikholwa linokusivumela eso sipho ukuba sizibonakalise ngexesha esasijonga ngaso, kuba sigcina inkululeko yakhe yokuzikhethela isivumele isipho ukuba sihambe okanye asiyenzi.
Funda kwakhona eli nqaku unyana wolahleko y Isikrweqe sikaThixo.
Yeyiphi imifuziselo yoMoya oyiNgcwele?
Inkolo yamaBhuda-Yazi le Nkolo ngokweenkcukacha